Manchester United oo xiiseynaysa Weeraryahan horay ugu soo ciyaaray Kooxda Manchester City – Gool FM
(Manchester) 21 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay xiiseynayso Weeraryahan hore ugu soo ciyaaray kooxda ay aadka u xafiiltamaan ee Manchester City.
Sida ay warinayso Shabakadda ciyaaraha ee ESPN Kooxda Manchester United ayaa xiiseynaysa Weeraryahankii hore ee Manchester City, Edin Dzeko kaasoo ay doonayso inay ka soo qaadato naadiga Roma.
Red Devils ayaa u ogolaatay Weeraryahannadeedii Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez inay ka tagaan suuqii xagaaga, waxaana ay ku guuldarreysatay inay soo qaadato bedelkooda.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa haysata doorashadiisa Weerarka kaliya Marcus Rashford, Anthony Martial iyo da’yarka kooxda u soo baxaya ee Mason Greenwood.
Weeraryahanka Kooxda Juventus ee Mario Mandzukic ayaa sidoo kale si xoog leh loola xiriirinayaa inuu 14 milyan oo gini ugu dhaqaaqo garoonka Old Trafford, laakiin ESPN ayaa warinaysa uu xiisahaas noqday mid qaboobay, isla markaana madaxda Man United ay doonayaan inay dib ugu soo celiyaan England ciyaaryahan Edin Dzeko.
33-sano jirkaan ayaa dhaliyey 72 gool 189 kulan oo uu u saftay Kooxda Manchester City intii lagu guda jiray waqtigii uu joogay garoonka Etihad intii u dhaxaysay 2011 iyo 2016.
Waxaa xitaa goolashaas ku jira labo gool oo uu ka dhaliyey kulankii Man City ay 6-1 uga adkaatay Man United ee Manchester Derby kaasoo ka dhacay garoonka Old Trafford, markaasoo ay ku guuleysteen horyaalkoodii ugu horreeyey Premier League iyadoo uu hoggaaminayey Roberto Mancini.
Xiddigan reer Bosnia ayaa sii waday inuu noqdo mid muhiim ah tan iyo markii uu ku soo biiray Roma sanadkii 2016-kii.
Waxa uu dhaliyey 93 gool 194 kulan oo uu u saftay kooxda Roma oo ay ku jirto 39 gool oo uu u dhaliyey xilli ciyaareedkii 2016-17.